အင်္ဂလိပ်စာရေးတတ်လိုသော်(၅) – ပါမောက္ခ မျိုးကျော်မြင့် ။ Learning to write in English | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အင်္ဂလိပ်စာရေးတတ်လိုသော်(၅) – ပါမောက္ခ မျိုးကျော်မြင့် ။ Learning to write in English
အင်္ဂလိပ်စာရေးတတ်လိုသော်(၅) – ပါမောက္ခ မျိုးကျော်မြင့် ။ Learning to write in English
Posted by kai on Apr 27, 2019 in Contributor, Columnist, Literature/Books, Myanmar Gazette |2comments
နှစ်သစ်ကူးမှာ အားလုံးပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို တကယ်လွမ်းစရာအချိန်မျိုးပေါ့နော်။ သင်္ကြန်ရက်ဆိုတော့ လူကြီးတွေရော၊ ကလေးတွေပါ အထူးပျော်မြူးကြတဲ့ အချိန် အခါမျိုးပါ။ ဥပုသ်စောင့်သူတွေက စောင့်ကြ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားသူတွေက သွားကြ ၊ရေပက်သူတွေပက်ကြ၊ ရေပက်ခံသူတွေခံကြနဲ့ သိပ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်မျိုးပါ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဦးနှောက်စားစေမဲ့ paragraph လေးတွေကို ခေတ္တရပ်ထားပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နှလုံးသားရှိသူတိုင်းခံစားနိုင်မယ့် ကဗျာလေးတွေ ရေးကြရအောင်။ နောက်လကြမှ paragraph လေးတွေအကြောင်း ပြန်ဆက်ကြတာပေါ့။ အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့ Haiku လို့ ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ဘာသာကလာတဲ့ ကဗျာတိုလေးတွေကို နမူနာယူပြီး Haiku လိုရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး syllable ဘာတွေထည့်မတွက်တော့ဘဲ Line3lines ကဗျာလေးတွေ ရေးကြရအောင်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ paragraph တို့ essay တို့ ရေးတတ်ဖို့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေမှာ စာရေးတာကိုိ စိတ်ဝင်စားလာအောင် ၊ဝါသနာလေးပါလာအောင် စာရေးလိုတဲ့ ပိုးလေးထကြွလာအောင် stimulus လေး ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အခုဒီ Line3lines ကဗျာလေး တွေကို ဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့ စိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင် လေးထားပြီးရေးကြည့်ကြပါစို့။ စာရေးသူရဲ့ ESL940 low intermediate အတန်းကကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အဲ့ဒီ Line3lines ကဗျာလေးကို နမူနာအဖြစ်ဖေါ်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကဲ ဒီကျောင်းသူလေးဟာ low intermediate အဆင့်မှာသာရှိသေးတာာဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာ အရမ်းကြီးမကျွမ်းသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ဒီကဗျာလေးကတော့ တကယ့်ကိုလှပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်လေးကလည်းကောင်းသား။ မြန်မာ လိုတော့ –
ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲ ထက်လည်း ပိုပြီး မာကျောတယ်
-မိန်းမသားဆိုတာ တကယ့်ကို အံသြစရာပါလား-လို့ ပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကဲ နောက်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကဗျာကို ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
She sees him, he sees her
Together they walk through the winter world of love
And me, I am justalonely observer
တကယ့်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကဗျာလေးပါနော်၊စကားလုံးနည်းနည်းလေးနဲ့ အဓိပ္ပါယ် တကယ့်ကို ပြည့်ဝတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ချစ်သူနှစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူမရှိတဲ့၊ အထီးကျန်နေသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀လေးကိုတစေ့ တစောင်း ဖော်ပြထားတဲ့ ၊စာဖတ်သူတွေကိုတွေးစေတဲ့၊မေးစေတဲ့ ကဗျာလေးပေါ့။ဒီကဗျာလေးကိုဖတ်ရတော့ ကဗျာဆရာမောင်ပန်းမွှေးရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို သွားသတိရမိတယ်။ဒီမှာဖော်ပြတာကို ဆရာပန်းမွှေးခွင့်လွှတ်မယ်လို့ထင်ပါ တယ်။
မြန်မာဘာသာစကားရဲ့ လှပမှုကို ဖော်ပြထားတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ဆုိရင် မမှားပါဘူး။ ဆရာပန်းမွှေးကို အားနာစွာဘဲ၊တတ်သရွေ့မှတ်သရွေ့နဲ့ ကြိုးစားပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက်တော့ ဖော်ပြပါကဗျာလေးထွက်လာပါတယ်။ခွင့် လွှတ်ပါဆရာပန်းမွှေးရယ်။
I offer Lotus Flowers to the Buddha
To hasten things so often delayed
may my wishes come true, soon!
မြန်မာကဗျာမှာ ‘ကြာ’ဆိုတဲ့ အသံလေးကို ကဗျာဆရာကပညာပါပါနဲ့ ထပ်တလဲလဲ သုံးထားတော့ သိပ်ကို အသံလွင်နေတယ်လေ။ အင်္ဂလိပ်လို alliteration လို့ခေါ်ပါတယ်။ နားဝင်ချိုစေတဲ့ technique လေးတစ်ခုဆို မမှာပါဘူး ကဲနောက်ထပ် Line3lines ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကြည့်ကြရအောင်။
I hear the bells tolling in the distance
If they are not for him
Who are they for – you and me?
အထက်ပါကဗျာလေးကတော့ စာဖတ်သူတွေငိုင်သွားစေတဲ့၊တွေဝေသွားတတ်တဲ့ ကဗျာလေးးပါ။ အဝေးမှာခေါင်းလောင်းသံတွေ ညံစီနေပါတယ်တဲ့။ ဒီခေါင်းလောင်းတွေဟာ ကွယ်လွန်သူကို ရည်စူးပြီးထိုးတဲ့ ခေါင်းလောင်းသံ တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်-မည်သူ့အတွက် များပါလိမ့်တဲ့။ မင်းအတွက်လား၊ကိုယ့်အတွက်လားဆိုပြီး ဆုံးထားတော့ စဉ်းစားစရာလေးတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြောလေ့ရှိတဲ့ ‘ကွေးသောလက် မဆန့်ခင် ဆန့်သောလက် မကွေးခင်’ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ Christian ဘာသာဝင်တွေကတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်အတိုင်းလို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အချိန်မဖြုန်းကြပါနဲ့။ Practice makes perfect ဆိုတဲ့အတိုင်း အင်္ဂလိပ်လိုရေးတတ်ချင်ရင် ချသာ ရေးချလိုက်ပါ။Line3lines ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးပြီးတဲ့ ကဗျာလေးတွေကို Myo.myint@wvm.edu ဆိုတဲ့ e-mail ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ နောက်လမှာသင့်တော်တာလေးတွေ ရွေးချယ် ပြီးဖော်ပြပေးပါ့မယ့်။နှစ်သစ်ကူး မှာအားလုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ။အင်အားအပြည့်နဲ့နောက်လမှာ paragraph လေးတွေဆက်ပြီးရေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေရော။
မကြာမကြာ ဝင် သင်ယူပါ့မယ်လို့စ်